La kulan Ulefone Power 5, mobiil wata batari weyn oo 13000mAh ah | Androidsis
Ulefone waa shirkad Shiineys ah oo ku dhowaad 20 sano ku jirtay warshadaha taleefannada taasi waxay u muuqataa, waqti ka waqti, qalab cusub oo aan lahayn waxqabad aan laga fiirsan. Shirkadani waxaa lagu gartaa, in ka badan wax kasta, tayada iyo qiimaha wanaagsan ee aaladeeda, mobilada oo waliba ku raaxeysta sumcad wanaagsan suuqa Yurub iyadoo ay ugu wacan tahay naqshadooda hufan iyo xarrago leh.
Munaasabaddan, shirkadda Aasiya ayaa na keentay Ulefone Power 5, oo ah taleefan casri ah oo qurux badan, awood badan, aadna u shaqeeya oo leh batteri weyn, waxna aan ka badnayn, wax yarna aan ka yarayn, 13.000mAh. Akhriska sii wad!
Ulefone Power 5 wuxuu ku qalabeysan yahay shaashad aad u weyn oo 6-inch ah FullHD + oo leh 2.160 x 1.080 pixels xallin ku saleysan caato ah oo raaxo leh 18: 9 saamiga dhinaca. taasi waxay noo fududeyneysaa inaan xajinno inkasta oo cabirka guddiga. Maxaa intaa ka badan, gudaheeda waxaa ku jira sideed-core Mediatek MT6763 oo awood badan oo awood u leh inuu gaaro saacadda ugu badan ee 2.0GHz, 6GB RAM xasuusta, 64GB oo ah awoodda booska kaydinta gudaha ee lagu ballaarin karo microSD illaa 256GB, iyo, sida ugu muhiimsan, batari 13.000mAh leh Super Fast Charge 5V / 5A lacag degdeg ah oo awood u leh inuu si buuxda qalabka ugu buuxiyo saacadaha 2.5, iyo taageerada 10W lacag bixinta wireless.
Dhinaca kale, Waxay wadataa laba 230MP + 21MP Sony IMX5 shidma gadaal leh OIS, Auto-HDR, f / 1.8 aperture iyo laba laydh Flash, iyo shidmaal kale oo 8MP ah oo shidma hore ah (isku dhexjira illaa 13MP) + 5MP oo leh f / 2.2. Sidoo kale waddaa Android 8.1 Oreo Maaddaama ay tahay warshad ku shaqeysa, waxay leedahay farsamo aqoonsi wajiga ah Aqoonsiga wajiga, akhristaha sawirka faraha ee dhinaca midig, iyo, marka loo eego cabirkiisa iyo culeyskiisa, wuxuu gaaraa 169.4 x 80.2 x 15.8mm miisaankiisuna waa 330 garaam.
Qiimaha iyo helitaanka Ulefone Power 5
Ulefone Power 5 waxaa loo heli doonaa iib ahaan ka hor laga bilaabo bisha soo socota ee Abriil 24 qiimo aan wali la cadeyn.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee taleefankan ah, booqo Bogga rasmiga ah ee Ulefone.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » La kulan Ulefone Power 5, mobiil wata batari aad u weyn oo 13000mAh ah